Beer Brewing Equipment, Brewhouse, Fermenter, Brite Tank - Ningbo COFF Machinery Co., ltd
I-NingBo COFF Machinery Co., Ltd ngumklami ophezulu osezingeni eliphezulu futhi okhiqiza imishini yokupheka ubhiya esezingeni eliphakeme eChina enenkonzo enhle kakhulu.
Sigxila ekukhiqizeni Izinsiza kusebenza Zokwenza Ubhiya ezisezingeni eliphezulu. Sinezindawo ezinhle kakhulu zokukhiqiza imikhumbi yensimbi engagqwali yomhlaba ebangeni lokuqala, iwayini, ubisi, utshwala, amakhemikhali amahle, umuthi, njll.
Isisetshenziswa sethu se-microbrewery kanye nensizakalo kudume kakhulu e-US, Canada, UK, New Zealand, Australia, Japan, Russia, nakwamanye amazwe ase-Eurasia kanye nezifunda. 80% wamakhasimende ethu avela enconyweni kazakwethu. Ngaphezu kwe-90% yamakhasimende akha ubuhlobo besikhathi eside bokusebenzisana nathi. Siyakwamukela ukuvakashela futhi ubambisane COFF!
funda kabanzi ngenkampani
Indawo yethu yezimboni ihlanganisa indawo engamamitha-skwele ayizinkulungwane ezingama-220. Sinomhlangano wokucobelelana ngolwazi omkhulu kunayo yonke embonini yezinsimbi zokuphuza utshwala eChina. Kuthatha ihora elilodwa nemizuzu engamashumi amane ukushayela usuka esikhumulweni sezindiza i-Shanghai Pudong International Airport noma imizuzu engamashumi amane ukushayela usuka esikhumulweni sezindiza i-Ningbo.
Sakhe iqembu lonjiniyela nabaqambi abayi-10, ikakhulukazi nazi onjiniyela abahlanu abaphezulu abaneminyaka engaphezu kwengu-15 yokuhlangenwe nakho okusiza imboni yezobuciko ukuthi iguquke futhi isungulele ikusasa.
Abasebenzi bethu bathole isitifiketi se-ASME weld.
Imikhiqizo yethu ithole isitifiketi se-ASME, AS1210.
inzuzo yonyaka （million Yuan）
indawo yokukhiqiza （m²）
Uma kuqhathaniswa nokushisa kwesiko kwendabuko, uhlelo lokushisa luka-Coff olunqenqemeni lokushisa uwoyela luhlinzeka ngamathuba amaningi ekwehliseni ukusetshenziswa kwamandla
ngenkathi uzuza ukusebenza okufanayo noma okungcono kokusebenza.
I-100% yenziwe ngensimbi engagqwali eqinisekisiwe. Abahloli be-Inprocess banikela ngamakhono we-FAT asebenza ngokugcwele futhi okungenani izikhathi ezimbili zokuhlolwa kokusebenza ngaphambi kokulethwa.
Iphaneli elisebenziseka kalula kulula ukuyiqonda futhi ivumela ukuqapha nokulawulwa okulula kwenqubo yokwenza ubhiya. Ithuba lokwenza inqubo yezinyathelo eziningi, ukuboniswa kwamanani wangempela futhi asethiwe.
Imiklamo yonke-inye ifakwe uhlelo lokupholisa nokufudumeza olufakwe ngaphakathi, olunamapayipi ngokuphelele futhi olunentambo ngohlelo lwepompo oluhlanganisiwe.
Ungalinganiseli ikhono lakho lokuphisa utshwala ngemishini emibi, siphilisa ubhiya wakho ngokusebenza okuphezulu, imikhumbi yokubilisa engabizi
Sijulisa imininingwane ukuqinisekisa ukuthi unomkhiqizo osezingeni eliphakeme kanye nensizakalo yobungcweti.
Isistimu Yokushisa Amafutha Okushisa
URrad More >>
Singumklami Ohamba Phambili Wezobuchwepheshe kanye noMkhiqizi Wezinsiza Zobhiya Eziphezulu Zekhwalithi Ephakeme